मगर दिवसको अवसर पारेर कुस्मामा मगर महोत्वस सुरु… – Setosurya
३६ औ मगर दिवसको अवसर पारेर पर्वतको कुस्माबजारमा सात दिने मगर महोत्सव आजदेखि शुरु भएको छ । मगर संस्कृतिको जर्गेना उद्देश्यले स्थानीय पुन युवा क्लव कुस्माले महोत्सब आयोजना गरेको हो । महोत्सवको पर्वत जिल्लाका प्रतिनिधीसभा सदस्य तथा युवा नेता पदम गिरीले उद्घाटन गरे ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद गिरीले मौलिक संस्कृति लोप हुँदै जाने खतरा बढिरहेको बेला यस्ता महोत्वसको अयोजना गरि संस्कृति जगर्ने गर्ने कार्यको थालनीले भावि पुस्तासम्म संकृतिको हस्तान्तरण हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले आफ्ना मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु सबैको दायित्व भएकाले पुन युबा क्लबले आयोजना गरेको यस्तो महोत्सव स्राहनिय भएको बताए ।
उनले सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास देशको पहिचान भएकाले त्यसको जगेर्ना गर्ने काममा आँफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । गिरीले संघीय प्रणालीमा देश गईसकेको र सबैको सम्मान समेत आवश्यक रहेकाले भाषा तथा संकृति संरक्षणमा राज्यले विशेष चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अबको ५ वर्षमा देशले काँचुली फेर्ने बताउँदै यस अवधिमा हुने विकासले सबै क्षेत्र भाषा धर्म र संकृतिलाई समेत फाईदा पुग्ने धारणा राखे । आगामी ५ वर्ष स्वर्ण काल बन्छ उनले भने केपी ओली नेतृत्वले देखेको सपना यही अवधिमा प्रतिबिम्वित हुन्छ ।
कार्यक्रमको विशिष्ठ अतिथिको रुपमा बोल्दै प्रदेश नं. ४ प्रदेश सभाका सदस्य जुनादेबि नेपालीले संस्कृति संरक्षणमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिईन् । कार्यक्रममा नेकपा एमाले पर्वतका उपाध्यक्ष भक्त कुँवर, नेपाली कांग्रेसका सचिब विश्व प्रकाश प्रसाई लगायतले मेला सफलताको शुभकामना ब्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमको पुन यबा क्लबका अध्यक्ष कृष्ण पुनले अध्यक्षता गरेका थिए । सात दिनसम्म चल्ने मेलामा सोरठी नृत्य प्रतियोगिता, पुरुष भलिबल, बास्केटबल प्रतियोगिता तारो हान्ने प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा लोक तथा जनवादी गायक बद्री पंगेनी, याम बहादुर केसी, दुर्गेश थापा, प्रिति आले, कृष्ण अखेली लगायत कलाकारको प्रस्तुती रहने आयोजक पुन युबा क्लबले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पर्वतलाई नमूना जिल्ला बनाउन सबैसँग सहकार्य गर्छु – सांसद गिरी
यस्ता पनि शिक्षक ! पर्वतका एक प्रधानाध्यापकले विद्यालयमै विद्यार्थीलार्इ याैन अपराध गरेपछि…..
प्रकाश दाहालले मौकामा चौका हानेपछि
बिवाह मण्डपबाटै बेहुला बेहुलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि……
प्रियाका श्रीमानले फेसबुकमा किन लेखे ज्यान मार्ने कुरा ?